ओलीलाई प्रश्न : संसद विघटन गर्ने तपाइले कति चोटि उठबस गर्ने ? – Butwal 24 News
September 26, 2021 September 26, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on ओलीलाई प्रश्न : संसद विघटन गर्ने तपाइले कति चोटि उठबस गर्ने ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नेताले प्रश्न उठाएका छन्– ‘पार्टी कमिटीमा छलफल नै नगरी पटक–पटक संसद विघटन गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन भुमिका खेल्ने नेताहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने ओली पक्षका नेताहरुले बैठकमा बताएपछि त्यसको जवाफ दिँदै अरु नेताले संसद विघटन गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
फरक पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने र आफ्नो पार्टीको नेतालाई सरकारबाट हटाउन भुमिका खेल्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज बैठकमा ओली पक्षका नेताहरुले उठाएका थिए । तर, यसो गर्दा संसद विघटन गर्नेले समेत कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने अन्य नेताले बताएका हुन् । ‘पार्टीमा छलफल नै नगरी पटक–पटक संसद विघटन गर्नु गल्ति हो कि होइन ? हो भने गल्ती गर्नेले कतिपटक उठबस गर्नुपर्ने हो ?’, एक नेताले छलफलमा उठेको विषयबारे रातोपाटीसँग भने, ‘अरुलाई दोष देखाएर भाग्न मिल्छ ?’
ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने विभिन्न दस्तावेजमाथिको समूहगत छलफलका क्रममा नेताहरुबीच यस्तो सवाल–जवाफ भएको हो । जारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा समूहगत छलफल सकिएको थियो ।
तीनवटै दस्तावेजमा छलफल गर्न १० वटा समूह विभाजन गरिएको थियो । समूहका नेताहरुले शनिबार निश्कर्ष सुनाएका थिए । छलफलमा सहभागीहरुले अध्यक्ष लगायतका नेताबाट पेश भएका प्रस्ताव पूर्ण नभएको बताएका थिए ।
दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि स्थानीले जलाए टिपर